एकजनाले कति जनासम्म मान्छेको अनुहार सम्झन सक्छ « रिपोर्टर्स नेपाल
तपाईं कतिजनाको अनुहार सम्झन सक्नुहुन्छ ? एक सय, दुई सय, हजार या लाख ? यो अवश्य पनि रोचक विषय हो जसको अनुसन्धान सजिलो छैन ।
शोधमा मानिसलाई एक घण्टामा ती मानिसको नाम लेख्न भनियो, जो उनीहरूको जीवनसँग जोडिएका छन् । यसमा विद्यालय, कलेज र परिवारजनसमेत पर्छन् । त्यसपछि उनीहरूलाई मसहुर हस्तीहरूको नाम लेख्न भनियो जो नेता, अभिनेता वा प्रसिद्ध व्यक्ति छन् । यस क्रममा सहभागीलाई पहिले त निकै मानिसको नाम आयो तर पछि अनुहार सम्झन निकै मुस्किल हुन थाल्यो । यसको परिणाम मानिसले एक हजारदेखि १० हजारका बीचमा अनुहार चिन्न सक्छन् भन्ने पुष्टि भयो । एजेन्सीको सहयोगमा